BBC Somali - Warar - Dowladda iyo AMISOM oo wafdi u diray Kismaayo
Dowladda iyo AMISOM oo wafdi u diray Kismaayo
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 2 Novermber, 2012, 20:48 GMT 23:48 SGA
Wafdi ka socda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa ka degay maanta magaalada Kismaayo.
Wafdiga ayaa ka kala tagay magaalooyinka Muqdisho iyo Nariobi.
Haddaba wariyaha BBCda Ibraahim Maxamed Aden ayaa safarkaasi ka waraystay kusimaha wasiirka gaashaandhiga ee Soomaaliya Xuseen carab Ciise oo uu ugu horeyntii waydiiyay waxa ay ku saabsanayd booqashadooda Magaalada Kismaayo.
Wasiirka ayaa sheegay in ay ku wehliyeen saraakiil ka socota AMISOM, ujeedkooduna ahaa in ay soo kormeeraan.
Waxaa uu sheegay in ay la kulmeen qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo.
Waxaa booqashadan ku soo beegmay maalin kadib markii ku dhowaad lix boqol oo qof lagu xirxiray magaalada.
Waxaa uu sheegya in dadka la xirxiray la baari doono wixii dambi lagu waayana la sii dayn doono.